Sistemụ na-etolite etolite na-eji mmiri apịtị apịtị
A na-eji usoro ube na-efe efe usoro ụgbụ enwere ike iji ya mee ọtụtụ ebe. Ugbu a, mgbe anyị na-atụle ụzọ dị mma isi na-ekpochasị ọnụ ụlọ, a na-eburu n'uche ụdị edozi ahụ site n'aka ndị ọrụ ahụike nke ndị ọzọ. Enwere ike iji ngwaọrụ ndị a rụọ ọrụ nke ọma na ebe ọrụ ma ọ bụ n'oge nnọkọ ezinụlọ, na ogige. A na-eji sistemụ arụmọrụ mejupụtara akụkụ ndị kacha mma, yana nozzles ejiri mee ya bụ njiri arụmọrụ dị elu.
Download katalọgụ na ndepụta ọnụahịa >>
A na-eji ube ahihia na –eme ka ihe na-adọ adọ adọ
Ngwaọrụ pọmpulo na-ekpochapụ oghere ahụ na usoro ụzọ mmiri ahụ nke akọrọ ọgwụ nje. Nkwadebe dị otú ahụ nwere mmetụta na-egbu egbu na nje na nje ndị dị na gburugburu anyị. Ihe si na ya pụta akpukpọ oku nwere ngwongwo di elu ma dikwa mma n ’elu dikwa ya.
N'ihi ekwe omume iji ya sistemụ arụrụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ niile, ya bụ, na saịtị, w ogige na n'ime ụlọ, na ekele maka ike iji ọgwụ na-adịghị mma, ngwaọrụ ndị a na-eji ọtụtụ ebe.
Sistemụ eji emehie ihe nke ọgbara ọhụrụ na-eji maka mmụba kemịkalụ kemịkal n'ụdị aerosol, nke na-enye ohere mgbochi, nke ahụ bụ, a na-enweta mbelata nke ukwuu na ọnụọgụ pathogenic microorganisms na ikuku.
Kpochapu microorganism nje na-eji sistem mmiri na-ekwekwa omume n'ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ na njem ọha.
Inwe ntuziaka n'uche Chief Sanitary Inspectorna igbochi mgbasa nke COVID-19, anyị na-enye ihe ngwọta nke oge a iji mee ka nchekwa dị na ọrụ.
Ọ dị mma ma na -eme ka mmiri dochie oghere dị iche iche site na iji ahihia kpọrọ nkụ
usoro nchebe ozugbo: masks, ndị nlegharị anya
ndị na-enye mmiri: ndị mmadụ guzoro na mgbidi
nnyocha nke ohere na mmepe nke ezigbo usoro nke ndị ọrụ na ndị ahịa iji belata ihe iyi egwu nke COVID-19 kpatara.
Azịza ndị a tụrụ aro gbasara ọdụ ndị na-egbu egbu, ndị na-ekewa oghere na akụrụngwa nchebe onwe ha bụ ihe bara uru ma na-eme ihe n'otu oge.
Lee kwa: New na-enye! Stationslọ ọrụ disinfection - ịdị ọcha maka aka si na METALCO
Mkpochapu oghere na uzo ahihia na-enye ohere itisa mbara ikuku na ikuku. Ọ bụ ndị otu ruru eru nke ndị ọrụ na-eme ya iji igwe na nkwadebe pụrụ iche. A kwadoro usoro a maka iji rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọha, ụgbọ njem ọha, ọfịs, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ ọgwụ.
Mkpochapu ahihia kpochapu bu uzo di nma ma di nchebe iji kpochapu oghere, dabere na usoro biodegradable, yana nkwenye maka ojiji na ihe ogwu n’echebe ya, megidekwara COVID-19.
INWETA N'AKA AKPO
Anyị ga-enyocha okirikiri arụ ọrụ nke ụlọ gị
Anyị ga-akwadebe ụkpụrụ maka ezigbo ọrụ nke ndị ọrụ na ndị ahịa ma belata ihe ize ndụ n'oge ntiwapụ ọrịa;
Anyị na-eme ka ahụmịhe anyị dabere na ọtụtụ afọ ọrụ maka ụlọ ọrụ si na ụlọ ọrụ HoReCa, n'agbụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ebe ọpụpụ nke ndị mmadụ na ngwaahịa bụ oke igodo;
Na ntinye aka na nyocha, anyị ga-ebuputa usoro dị iche iche metụtara ọdụ ndị na-egbu egbu, ndị na-ekewa oghere, ihe nchedo onwe onye, ​​nkwukọrịta okwu
AKW OFKWỌ NSOGBU NKE ANY BY NA-EKWU NSỌ
UNUQUE SOLUTION ikwe ka ikuku ghara ịdị n’elu mbara na ikuku;
Onye rụrụ ya ỌKPALRAL AHALRAL eji EGO NA-EKWU PIIJI
AKW APKWỌ AKW APKWỌ AKW FORKWỌ FORM. EGO : na ụlọ ọrụ ọha, ụgbọ njem ọha, ọfịs, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ ọgwụ;
EGO Mgbapu mmiri na-eji igwe anyị (100 m3 ewe ihe dị ka 6 min)
AKW ANDKWỌ na enweghị nchekwa, dabere na usoro usoro biodegradable, enweghị aldehydes, enweghị chlorine, enweghị mmiri ọgwụ na-egbu egbu;
Ngwaahịa nwere mmemme yana nchekwa nchekwa Anabatara maka ojiji
KWESFR EF ANYIV EGO
Mezuru ụkpụrụ EN14476 n'ihe gbasara ahụike, megide ọrịa ndị na - enweghị nje. Norovirus, Poliovirus, Adenovirus) na casing (Vacciniavirus) nke gụnyekwara COVID-1
AKWGKWỌ AKWGKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ AKW ASKWỌ KWES ASR AS BATARA
Ikike iji zụ ahịa ngwaahịa biocidal: Mba. 7420/18. Akwụkwọ PZH No.BK / K / 0863/01/2018
Sọọsọ Biocidal: Ọ na-ebibi nje, nje, spores-spores, fungi, ebu
edinam: Ngwurugwu zuru oke, nhicha, nhicha, ndozi, ikuku ikuku, mwepu ahiri
wepu: Uzuzu, uzuzu, uzuzu, udu mmiri, mmetọ ihe ndi ozo, umu ihe ojoo, Pathogens
Uru na uru maka onye ọrụ
SAFE maka onye ọrụ, dabere na usoro ọhụụ, usoro biodegradable na-enweghị mmanya, enweghị aldehydes, enweghị chlorine, ọ nweghị ọgwụ na-egbu egbu.
NON-FLAMMABLE - usoro eji eme mmiri anaghị ere ọkụ na - ewepụ ihe ọkụ.
Kwekọrọ - NEUTRAL maka ọtụtụ ihe: plastik, ọtụtụ ọla gụnyere aluminom, gaskets roba, ihe mkpuchi agba, akwa ...
MULTI-TASK - ịsa aka, fesa, ihicha, ụfụfụ na-arụ ọrụ, ịsa ahụ, fumigation
NA-asacha na nke dị ọcha - na-ewepụ ntụpọ na ihe ndị na-emerụ ahụ nke ọma: na-ewepụ ebu, ero, uzuzu, griiz, mmanụ, mmanụ na-egbu egbu site na akwa na akwa, ịgbọ agbọ, nsị, ọbara, nri na-emebi, ahịhịa ahịhịa, ihe mkpofu, wdg.
Mepụta ACTIVE FOAM na ụfụfụ ụfụfụ, nke gbatịpụrụ ihe ahụ na mbara ihu na ọwa
100% doro anya nke mgbochi - anwale dịka ọtụtụ European EN ụkpụrụ. (* tebụl)
EGO NA-ADFR EF EGO - Nke kachasị dị na biocidal dị iche iche n'oge dị mkpirikpi ruo minit 15 (nje bacteria, nje, ero, spores)
ỌR BI BIOCIDAL NA-ADASTR - - Ebibie Legionella Pneumophila n'ime 1 nkeji dịka EN 1040, EN 1276.
Na-egbochi usoro nke ero, ebu na nje bacteria, n'ihi na ọ na-ebibi spores (spores) - ọ bụghị naanị na-egbochi uto nke microorganisms, kamakwa na-ebibi mkpụrụ ndụ ihe nketa ha.
Na-ewepụ oge - Na-ewepụ isi na-adịghị mma, na-esi ísì ụtọ nke ihe mkpofu organic ma wepụ isi ọhụrụ.
NANOCLEAN AIR GDU nkwadebe (AKW TOKWỌ NIILE EGO) bụ ihe na-anaghị anyụ anyụ, mmiri.
Nkwadebe ahụ bụ ihe na-egbu egbu, anaghị egbu egbu, nke na-abụghị carcinogenic, na-enweghị ihe nfụkasị na enweghị iwe.
Nchịkwa 5% arụ ọrụ ego anaghị nkewa dị ka iwu Regulation 1272/2008 / EC siri dị.
Zere ụmụaka. Gụọ SDS tupu ojiji.
Ngwurugwu puru iche nke ihe nchoputa dabere na ọla anwuru na ọla.
IHE NDF NA-AD EF AKWFKWỌ AKW --KWỌ - Thedị biocidal kachasị ukwuu na obere oge ruo 15
(Bacteria: 1 ÷ 5 nkeji, Nje Virus: Nkeji 5, Fungi: 1 ÷ 15 nkeji, Spores: 5 nkeji, Mycobacteria: 5 nkeji)
BIOCIDAL FAST - na - ewepu nje bacteria Legionella Pneumophila na 1 nkeji dịka EN 1276 si kwuo.
NA-EBUTARA usoro nke nje bacteria, fungi na ebu, n'ihi na ọ bụghị naanị na-egbochi uto nke ụmụ nje, kamakwa ọ na-ebi mkpụrụ ndụ ihe nketa ha. Nyochaa - A nwalere ya dị ka ọtụtụ ụkpụrụ iwu Europe EN si dị.
Na-ewepụ ihe na-esi ísì ụtọ - na-ewepu isi nke ero na-adịghị mma na nsị na-adịghị mma nke ihe mkpofu ahihia.
SAFE maka onye ọrụ, dabere na usoro nchekwa dị mma, enweghị aldehydes, enweghị chlorine, enweghị acid.
NON-FLAMMABLE - Nhazi nke mmiri na-ekpochapụ ihe egwu ọkụ.
MULTI-TASKING - nhicha akwụkwọ ntuziaka, ịsụ mmiri, hichapụ, ụfụfụ na-arụ ọrụ, imikpu, fumigation.
NKWUKWU NA ỌR - - n'ụzọ dị irè na-ewepụ nsị na ihe ndị na-emetọ ihe: na-ewepụ ebu, ero, uzuzu, griiz, mmanụ,
mmanu mmanu sitere na ihe onwu na akwa, akwa, uhere, obara, nri ire ere, ihe ndi ozo, wdg.
O nwere nkwenye PZH na PERMIT iji zuta ahia ahia biocidal.
Lee ihe atụ nke realizations METALCO
Clostridium mgbasa mgbasanke na-enye disinfectionkedu ụdị ikuku ikuku na-egbochinke putara na okwu disinfectionkedu ihe bụ disinfectionihe na-egbochi ọrịa na etu o si dị mkpa igbochi mgbasa ọrịakedu ihe bụ disinfectionihe na-emebi emebi, mkpofu, mbibiihe na-emebi emebi na emebi emebikedu ihe bụ disinfection na gịnị ka ọ dị?ihe na-egbochi ọrịa na olee otu o si dị mkpa igbochi mgbasa ọrịagịnị bụ ọgwụ mgbochi na gịnị bụ ọrụ ya n’igbochi mgbasa nke ọrịa?kedu ihe mgbochi na igba ogwugini bu ntu ntukedu ihe bụ disinfection na ịchọ mmakedu ihe mgbochi na ịcha ntutuGịnị bụ okwu disinfectionKedu ihe bụ ọgwụ disinfection na otu o si enyere aka igbochi mgbasa ọrịaGịnị bụ okwu disinfectionkedu ihe disinfection pụtarana-efe efeofufe 24ogwu na igba ogwuakpụkpọ ụkwụ mgbochiakpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ mgbe mycosis gasịrịakpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ahụ lumpexkedu ihe bụ disinfectiondisinfection ihe ọ bụdisinfection ihe ọ bụ na otu o si dị mkpa igbochi mgbasa ọrịagịnị bụ ọgwụ mgbochi na gịnị bụ ọrụ ya n’igbochi mgbasa nke ọrịa?disinfection ihe ọ pụtaraofufe na - ewepudisinfection gịnị mere ị .ụbiga mmanyankọwa disinfectionogwu na igba ogwuofufe na mgbochiogwu na igba ogwu na ebe egwuru egwu pdfdisinfection ogologo ogeegg disinfectiondisinfection kadisinfection ihe ọ dị mkpadisinfection nke dị mkpa iji gbochie mgbasa nke ọrịadisinfection nke dị mkpa maka igbochi mgbasa ọrịadisinfection nke dị mkpa na igbochi mgbasa ọrịantụ oyi ikukuntụ ntụ na-eme ka ikuku ghara ịdị ọchadisinfection nke quilts na nkwari akụ ọ bụla oledisinfection nke ọkụkọ coopdisinfection nke azu ulo azudisinfection nke uloofufe nke ngwaọrụmgbochi akpụkpọ ụkwụozone disinfectionozone disinfection kedu ihe ọ bụọgwụ mgbochi njedisinfection mgbe pinwormsdisinfection mgbe ọnwụdisinfection mgbe onye nwụrụ anwụdisinmịchaa ọgwụ nwụrụelu mmiriigwe na-asacha igwena-emegharị iheaka disinfectionọnya ọgbụgbaọnya ọgbụgbaakpụkpọ mgbochidisinfection nke olulu mmirimiri nke oma na emebimiri na-egbu mmiri na sodium hypochloriteakọrọ alụlụkemịkalị nke ikuku na-eli ogo olemgbochi nke ikuku mmiri nke nrụnye mmiri ọkụ ka mgbe niiledisinfection na-ekpo ọkụ mgbe niilemgbochi mmirimmiri nke mmiri ọ drinkingụ .ụụmụaka ji egwuri egwuna -eme ka ahihiaEgo ole ka ọ na-eri iji kpochapụ oke ọchịEgo ole bụ disinfection nke uloEgo ole ka ikuku mgbochi nje na-eriego ole bụ ọgba aghara ụgbọ ala ịzụ ahịaogologo oge ole ka ikuku ikuku na-ekurukedu ka disinfection si yiekedu ka disinfection nke ulo yiriihe dị mkpa nke ọgwụ mgbochi iji gbochie mgbasa ọrịana-asacha ma hichaa akaDemodex disinfectionkọwaa ịdị mkpa nke ngwaọrụ na arịaakụkụ parvovirosisntụgharị ikuku na-ekpo ọkụ ikukuọgwụ mgbochi njemycobacteria, disinfectionlelee okwu oge ezighi ezi na ihe omuma ndi di ugbu a ma dee ihe obuigba ogwu na disinfectionihicha akọrọakpukpọ okuscabies disinfection nke ulooge disinfection ihe ọ bụoge disinfection, nke dị mkpa iji gbochie mgbasa ọrịawayoechiche nzuzuimebi uloigwe na-ekpo oke ọkụwayo ulvọnụ ahịa ịgba ụgwọnzuzu ulv reviewsWarsaw anwụ anwụọchicha mgbali elu
Hụ edemede ndị ọzọ:
Ogige egwuregwu Metalco
Ebe egwuregwu nke oge a na-enye ohere maka enweghị mgbochi na nchekwa dị egwu n'èzí ọ bụghị naanị maka ụmụaka nọ n'afọ ndụ niile, kamakwa ndị na-eto eto. ...
Ugbu a, ngwá ụlọ dị n'okporo ámá gụnyekwara ihe mkpuchi osisi. Enwere ike ịme ihe ndị a na-arụ ọrụ ma na-achọ mma n'ọtụtụ ihe. ...
New na-enye! Stationslọ ọrụ disinfection - ịdị ọcha maka aka si na METALCO
Dislọ mmerụ ahụ / ọdụ nchekwa aka bụ ihe ọhụrụ na anyị na-enye dị ka akụkụ nke obere ije. Ọ bụ ihe ga-eme ka ọ dị mfe ...
Posts dị ịtụnanya
A na-eji obere ihe owuwu na-emepụta obere ihe owuwu n'ime oghere obodo ma ọ bụ tinye ya na ụlọ nkeonwe yana ...
Berlọ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ nke Republic of Poland
Ọ bụ eziokwu na ọrụ onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ bụ ọrụ nweere onwe ya nke nwere ike iweta ọtụtụ afọ ojuju na uru ihe onwunwe, mana ụzọ iji bido ọrụ ...
Ihe mkpofu mmiri
Ibe ahihia dị ka akụkụ nke imegharị obodo na-enyere aka mee ka ebe ọhaneze dị ọcha, kpochapụ nsogbu metụtara ...
ANYANW BR ANY.
Webụsaịtị onye nrụpụta
Nye anyi oku
Dee ozi ịntanetị
© AKWMKWỌ OBI 2020BỌ XNUMX |Nzuzo
Inye Ihe Ngwaahịa
A ga-eji data nkeonwe gị iji hazie usoro gị, jikwaa nleta gị na weebụsaịtị anyị na maka ebumnuche ndị ọzọ dị ka ekwuru na nke anyị Iwu nzuzo .
Agụọla ma nabata iwu weebụsaịtị